Skype amin'ny iPad | Martech Zone
Skype amin'ny iPad
Alatsinainy, Aogositra 15, 2011 Alatsinainy, Aogositra 15, 2011 Douglas Karr
Mbola tadidiko ihany rehefa noheverina ho somary ivelan'ny fenitra ny takelaka. Na izany aza, be dia be ny rindranasa manova ny interface-n'ireo mpampiasa azy ary mety amin'ny takelaka misy izany is niova. Androany fotsiny dia navelako tao an-trano ny solosainako rehefa nankany amin'ny Barnes sy Noble aho. Nentiko tany ny iPad-ko ary nandalo asa be aho.
Na dia manana Thunderbolt miaraka amina efijery goavambe aza aho, dia mbola manana trano sy trano mora ampiasaina kokoa ny iPad-ko. Tsy irery aho… nitatitra i Digitimes fa 40 tapitrisa ny takelaka iPad hamidy amin'ny 2011 ary antenaina hiakatra avo roa heny izany isa izany isa amin'ny taona ho avy. Ny takelaka fahatelo dia antenaina hahita fitomboana isa telo! Ny fivarotana laptop kosa dia manana Nihena be. Tonga ilay takelaka!
Ity misy dokam-barotra momba ny famotsorana an'i Skype ho an'ny iPhone:
Ankehitriny Skype dia amin'ny iPad. Ny fanontaniana tokony hapetraka, inona no hataony amin'ny tsenan'ny finday? Mitombo hatrany ny varotra smartphone - mihoatra ny varotra PC… mbola hitohy ela ve izany? Raha ny marina rehetra, raha afaka miantso kalitao amin'ny alàlan'ny Skype amin'ny iPad amin'ny alàlan'ny fifandraisana tsy misy tariby (raha tsy hoe manakana azy ireo ny mpanome tariby)… mila telefaona ve aho? Azonao atao ve ny mahita ny varotra amin'ny findainao tanteraka?
Tags: fangatahana fanendrenaFitantanana media sosialy malalakaGoogle AdWords ho an'ny SEOGoogle Analytics ho an'ny SEOArchives momba ny sarimihetsika amin'ny InternetJirampitantana varotra
Inona no mitranga amin'ny tranokalanao izao?
Ady kalitaon'ny valin'ny fikarohana Google
15 Aogositra 2011 amin'ny 11:00 PM
Ny drafitry ny telefaona finday dia hivadika ho drafitra angona finday. Vetivety dia ampy ny fivezivezena amin'ny feo rehetra. Ny fanontaniana tokana dia ny fampiasa endrika hampiasanao amin'ny serasera. Te handray ny solosaina findainy, ny takelaka misy ahy na ny kitapom-bolako ve aho?